Mabhuku angu matatu ekuverenga mukudonha | Zvazvino Zvinyorwa
Autumn yakatanga mazuva mashoma apfuura uye ini ndatova nerondedzero yangu ye Mabhuku matatu ekuverenga pachiteshi ichi. Ndinoda kugona kuverenga zvakawanda asi nguva yacho zvino haisi yekuti ndapera saka parizvino ndichafanirwa kugadzirisa vatatu kuwedzera pakupedzisa neyandiri izvozvi neiyo "yandakatamba" newe chinyorwa changu chekare. Vanhu vakapindura, vakawana zvakanaka! Hongu, raive bhuku ra Clarissa Pinkola Estes, «Vakadzi vanomhanya nemapere». Ini ndinoifarira uye iri kujekesa kwazvo dzimwe nguva.
Zvebhuku rino ndichave nemapeji angangoita zana, uye ndatova nepfungwa kuti ndeipi ichave inotevera uye ndeapi achatevera iyi. Kana iwe uchida kuziva izvo zvavari mabhuku angu matatu ekuverenga mukudonha, ramba uchiverenga.
1 "Compass imwechete" naDavid Olivas
2 "Kuguma kwega" naBenedict Wells (1984)
3 "Kuchema kwerudo kubva pakati penyika" naKyoichi Katayama
"Compass imwechete" naDavid Olivas
Handizive kana zita nemunyori zvaunoziva kwauri, asi kusvika nguva pfupi yadarika ndanga ndisingazive nezvemunyori mudiki uyu. Yakanga iri yekutenda kuTwitter pandakaona chimiro chake uye ndaigona kuverenga kuti iri ibhuku rake repiri uye kuti akatoburitsa yapfuura rakanzi "Serendipity". Handisati ndamboverenga chero chinhu chake kunze kwebhuku "Compass imwechete" iri kuchema kwandiri ...
Chokwadi ndakaitenga mu ebook vhezheni, nekuti nzvimbo iri kushomeka kwandiri ingangoita seynguva uye kana uchida ini ndinogona kuiongorora kana ndapedza.
Iyi ndiyo nyaya yaAdolfo naEduardo, vaviri mapatya hama avo, kunyangwe vakafanana, vakasiyana zvachose. Kunzwa kuchashanda nzira yavo pakati pekutya nehushingi kutidzidzisa kana isu takagadzirira zvechokwadi kuda kunyangwe asiri iye munhu wataitarisira.
David Olivas anotikoka parwendo rwatino pfuura narwo rwechidiki, kusahadzika kwekutenda, rudo uye ushingi, zvese zvine tarisiro imwechete: kugadzirisa mibvunzo yedu pachedu.
"Kuguma kwega" naBenedict Wells (1984)
Uyu munyori weGerman akakunda iyo European Literature Mubairo muna 2016 nerino novel. Iyo yakagadziridzwa na Edhisheni Malpaso uye ine mutengo we23 euros.
Zvinyorwa zvake zvinonyanya kubata pfungwa dzangu. Unofungei? Sechimwe chidimbu cheruzivo, hachizoburitswa kusvika zuva racho 27 yeOctober. Tichafanirwa kumirira!
Sezvo vabereki vake vakafa mutsaona, Jules ave mwana anogara akavharirwa mupasirese nyika yake sekureba Alva, nebvudzi rake dzvuku uye magirazi egobvu, asingagare padhuze naye. Alva achange ari iye oga rudo rukuru, kunyangwe ivo vese vasingakwanise kuwana hushingi hwekumuudza. Mugumo wavo, wakatarwa nehucheche hwakaoma "hunobata kunge muvengi asingaonekwe pazvisingatarisirwe", zvinowirirana neizvo zvehama dzaJules.
Nhau huru yerudo inopfuura rudo rwunonzwikwa nevapikisi vayo. Iko rudo rwekunyora, hunyanzvi, mimhanzi, uye pakupedzisira hupenyu. Yekudzidza inoverengeka kubva kune mudiki nyeredzi yechiGerman chinyorwa chiitiko.
"Kuchema kwerudo kubva pakati penyika" naKyoichi Katayama
Kubva paruoko rwe Alfaguara Iyi nhoroondo inodzokororwazve, inova maererano navo ndiyo inonyanya kuverengerwa yekuJapan yekuverenga nguva dzose. Yakaburitswa muSpain kekutanga mu2008 uye kubvira ipapo yapfuura iyo huru Haruki Murakami mukutengesa.
Ini, pamwe nekuda kwekuyemura kwangu kukuru kunyora kwaMurakami, ndakaramba kuverenga munyori uyu, kusvikira zvino! Ini handichakwanisi kuitora zvakare uye handidi kungoverenga iyi nyaya ine ongororo zhinji asi zvakare kuona kufanana uye misiyano inogona kuvapo pakati pevanyori vaviri veJapan.
Sakutarô naAki vanosangana pachikoro chiri muguta rematunhu muJapan. Iye akangwara uye anotsvinya achiri kuyaruka. Akangwara, akanaka, uye ane mukurumbira. Ivo nekukurumidza vanozove shamwari dzisingaparadzanisike, kusvikira rimwe zuva, Sakutarô anoona Aki nemaziso akasiyana, uye hushamwari hwakabatana hunoshandurwa kuita chishuwo chakasimba. Vaviri vanorarama nyaya inokwanisa kukanganisa pfungwa uye kudzima miganho pakati pehupenyu nerufu.
Uye iwe, iwe unotova nerondedzero ine kuverenga kunozokuperekedza uku kudonha?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku angu matatu ekuverenga mukudonha